Tongasoa eto amin'ny tsara tarehy Vidbixas toeram-piompiana. Ny toerana noho ny raharaham-barotra fivoriana, ny fampakaram-bady sy ny antoko
Tongasoa eto amin’ny tsara tarehy Vidbixas toeram-piompiana. Ny toerana noho ny raharaham-barotra fivoriana, ny fampakaram-bady sy ny antoko
Krismasy fotsiny manodidina amin’ny zorony, ary fotsiny ianao amin’ny andro ho order ny sakafo Krismasy. Izany dia ho tena Krismasy amin’ny sakafo tsara.
Mahay chef. Rehetra tena amim-pitiavana za-draharaha.
Tena tsara izany fomba izany
Mivory ny fianakaviana sy ny namana ho hariva ny tsara sakafo sy zava-pisotro. Isika hanompo ny lalàna sy ny hikarakara ny zava-drehetra, ary ianao dia manam-potoana mba handeha ho avy sy miala voly miaraka. Agriturismo Vidbyxas dia voahodidina mahafinaritra manodidina azy fa manasa anareo mba fanatanjahan-tena, misy ny toetry ny lalana, mampirehitra ny lalana, ny Golf, ny fandroana sy tsara tarehy maha-piarovana. Tonga sy hankafy izany! Asao ny namana iray mahafinaritra hariva tao amin’ny toeram-pambolena, Vidiksis. Ankafizo ny hariva amin’ny tsara sakafo sady tsara ny zava-pisotro. Tahaka ny ao an-trano, fa tsy nisy varavarankely! Krismasy fotsiny manodidina amin’ny zorony, ary fotsiny ianao amin’ny andro ho order ny sakafo Krismasy. Izany dia ho tena Krismasy amin’ny sakafo tsara.
Asao ny namana iray mahafinaritra hariva tao amin’ny toeram-pambolena, Vidiksis. Ankafizo ny hariva amin’ny sakafo hariva tsara sy tsara zava-pisotro. Tahaka ny ao an-trano, fa tsy misy iray vilia! Noho izany, rehefa ela ny andro fiasana, dia mety ho tsara mba hiala sasatra, ary tony nandritra ny fotoana kelikely, mandevon-kanina rehetra, ny fahatsapana. Noho izany, mialoha ny sakafo hariva ianao, dia ho hitanao ny fialam-boly faritra miaraka amin’ny sauna sy Jacuzzi. Feno Birao avy livres sterling isan-olona. Ampidiro ny fehezan-dalàna eo amin’ny toerana Ny alatsinainy teo ho an’i Sarah dia ny fahafahana ho tafiditra ho ampahan ny diany. Avy ny voalohany kafe aina ny fiainam-panambadiana, ary avy eo dia ho toy ny ampahany amin’ny tenantsika manokana.
Satria isika tia ny fampakaram-bady
Lalina, amin-kitsim-po, ary angamba ny kely be loatra. Ny fianakaviana cozy efi-trano dia tastefully voaravaka sy ny manana double efitra, ary manaraka izany dia efitrano kely iray fandriana fandriana. Malalaka sy cozy efi-trano ho an’ny olona amin’ny faritra lehibe. Eto ianareo afaka matory tsara kokoa,»kely te hatory olona», amin’ny zavatra rehetra ny aina Carpe Diem-na Jensen am-pandriana efi-trano. Mahafatifaty io sy cozy iray efitra dia tastefully izay voaisy fipetrahana. Matory tsara eo am-pandriana antsoina hoe Carpe Diem na Jensen
← Mampiaraka lahatsary ao soedoa: Fiarahana amin'ny Aterineto ny lahatsary amin'ny chat, ankizivavy no miandry anao
Mahazo ny mahafantatra ny sary ao Soeda. Fivoriana miaraka amin'ny sary olona tena izy. Tsy misy fisoratana anarana →